Itsva Lululook Apple Watch Matambo | Ndinobva mac
Nyowani Rudziok Apple Watch Tambo
Iyo ndeimwe yemafemu aya anoita kuti iwanikwe kune vashandisi akateedzana emamodeli akafanana chaizvo neakatanga Apple tambo asi zviri pachena kuchengetedza nzvimbo. Mune ino kesi Lululook yakatanga chirongwa chitsva chemabhande eApple Watch Inoenderana nemhando dzese dzeApple smartwatch, nemitengo inodhura uye mhando yakanaka chaizvo.
Mazhinji mamodheru akafanana neayo Apple, haazi ese ari chaiwo makopi, saka unogona kusarudza pakati pemhando dzakasiyana dzavanadzo mune yavo chigadzirwa katarogu sezvatinotaura zvakachipa chaizvo kune akanaka apedza avanopa.
1 Silicone tambo, mamilanese, nedzimba dzakabatanidzwa ...
Silicone tambo, mamilanese, nedzimba dzakabatanidzwa ...
Huwandu hwemamodeli avanopa hwakakura chaizvo uye isu tinogona kuwana ese marudzi emabhanhire. Mune ino kesi isu tine iyo mavara matsva mumicheka yesilicone, matsva magadzirirwo ayo anopa mhando yebhureki pakuvhara uye ayo akagadzirwa ekutevedzera dehwe Iine magineti ayo ayo isu tinosimbisa kuti anobata zvakanaka.
Kuwana kubva pano kune ese tambo tambo dzeApple Watch kubva kuElubokok
Muzviitiko zvese tambo dzehunhu hwakanaka uye tinogona kutaura kuti mune zvimwe zviitiko vane chaiwo makopi eApple tambo, asi kwete ese. Mavara mazhinji uye zvinogona kusangana kupfeka yako Apple Watch zvisinei iwe zvaunoda.
Iyo yekuda kuziva modhi yavanayo mune yavo katarogu ndiyo iyo Apple Tarisa Rainbow Bhendi iyo inowedzera yayo kesi yewatch. Mupfungwa iyi tinowana chaja yeApple Watch ine USB kutora chero kupi uye kupawo zvimwe zvishandiso zvemidziyo yedu, kungave kubva kuApple kana kwete.
Kupera kwetambo dzavanadzo dzakanaka nekuvharwa uko uye nechikamu chehokore kune wachi yemhando. Iwo ekuteedzera ematehwe mamodheru anotombove nekadiki okusimbisa kubata zvirinani tambo uye izvi zvinonyatsopokana nekufamba kwenguva. Sezvavanotaura pawebhusaiti pachayo, tambo idzi dzakazara inowirirana neiyo nyowani Apple Watch Series 6 uye SE, mukuwedzera kune mamwe ese mamodheru emhando. Zvine musoro isu tinofanirwa kudoma modhi tisati tatenga
Tambo dzeApple Tarisa hurukuro
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Nyowani Rudziok Apple Watch Tambo
Adobe Premiere uye Photoshop Elements 2021 Zvino Inowanikwa neMac
Zvinyorwa zvitsva paApple TV + inonzi Earthsound